Live in Five 2.7.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.7.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား Live in Five
Live in Five ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
One app, to live stream either events in your life, or gameplay on your screen! Switch between the two modes easily. Broadcast to the worldwide on popular video streaming platforms.
"Live in Five" and "Live in Five—Gamers" are now integrated into one single app. The new "Live in Five" app broadcasts either your SCREEN, or your CAMERA.
Show friends and followers how you outsmart your opponents, or show off your latest gadgets. Share your best achievements, the moments you messed up, and everything in-between, in real-time, to multiple channels on popular streaming platforms, including YouTube, Twitch, and LIVEhouse.in.
• Game streaming only supports Android 5.0 or later
• Easy to use: Intuitive interface, go live in minutes
• Game list: Select and launch games installed on your device
• Front camera overlay: Share your live reactions at any time
• Chatroom integration: See live messages from subscribers
• Share on social networks: Invite your friends to watch your channel
• Exclusive situational switch: Switch modes in unexpected situations
သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာစီးသင့်အသက်တာအတွက်ဖြစ်ရပ်များ, သို့မဟုတ်ဂိမ်းတစ်ခုခုကိုအသက်ရှင်ရန်တစ်ခုမှာ app ကို,! အလွယ်တကူနှစ်ခုသည် Modes အကြားသို့ပြောင်းပါ။ လူကြိုက်များဗီဒီယို streaming များပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထုတ်လွှင့်။
"ငါးအတွက် Live" နှင့် "ငါး-ဂိမ်းကစားသူများအတွက်တိုက်ရိုက်" ယခုတဦးတည်းတစ်ခုတည်း app ကိုသို့ပေါင်းစည်းကြသည်။ အဆိုပါ app သစ်ထုတ်လွှင့်သော်လည်းကောင်းသင့်ရဲ့ SCREEN ကို, သို့မဟုတ်သင့်ကင်မရာ "ငါးအတွက် Live" ။
သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက် outsmart ဘယ်လိုမိတ်ဆွေများနှင့်နောက်လိုက်များပြရန်သို့မဟုတ်သင့်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေချွတ်ပြသပါ။ Youtube, Twitch နှင့် LIVEhouse.in အပါအဝင်လူကြိုက်များ streaming များပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်မျိုးစုံလိုင်းများမှ, Real-time အတွက်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုတွေ, သငျသညျထ messed အအချိန်လေးနှင့် In-အကြားအရာအားလုံးမျှဝေပါ။
•က Android 4.3 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
•ဂိမ်း streaming များသာက Android 5.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းထောက်ခံပါတယ်
•လွယ်ကူစွာသုံးစွဲဖို့: အလိုလို interface ကို, မိနစ်တိုက်ရိုက်သွား
•ဂိမ်းစာရင်းထဲမှာ: သင့် Device ကို install လုပ်ဂိမ်းကို Select လုပ်ပါနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ
ရှေ့ကင်မရာပြသမှု•: သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှု Share
• Chatroom ပေါင်းစည်းမှု: စာရင်းသွင်းသူများမှတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ပါ
•လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဝေမျှမယ်: သင်၏ရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်သင့်မိတ်ဆွေများ Invite
•သီးသန့်အခွအေန switch ကို: မမျှော်လင့်ဘဲအခြေအနေတွေမှာ Switch သည် Modes
Live in Five အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Live in Five အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Live in Five အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Live in Five အား အခ်က္ျပပါ
alkasir2030 စတိုး42.76k
Live in Five ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Live in Five အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.avermedia.com/app_privacy/privacy_policy.html
App Name: Live in Five
Release date: 2019-09-02 12:41:07
လက်မှတ် SHA1: 67:B4:C7:31:11:18:11:28:40:D8:B7:D2:C4:55:66:EB:8F:09:06:48
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Tim Lee
အဖွဲ့အစည်း (O): AVerMedia
နယ်မြေ (L): New Taipei City
နိုင်ငံ (C): 886
Live in Five APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ